I-Asus Eee Pad Slider, ithebhulethi enebhodi yezitshixo | I-Androidsis
Siyaqhubeka nokuchaza Izixhobo ze-Android ezaziswa ngu-Asus kumsitho wangoku we-tech owenzeka eLas Vegas, eCES. Ngeli xesha ithebhulethi inezinto ezithile esizibonayo apha ngezantsi.
UAsus Eee Pad Slider
Sihamba sisiya kwisixhobo esikhudlwana kunesangaphambili UAsus Eee Pad MeMo kunye nekhibhodi, njengoko igama layo lisitsho, ukutyibilika phantsi kwescreen. Inkqubo ye- UAsus Eee Pad Slider Kuza nobukhulu bekhusi endibuthandayo, i-intshi eyi-10,1, isisombululo see-pixels eziyi-1280 × 800 kunye nepaneli yohlobo lwe-IPS.
Un Iprosesa yeNvidia Tegra 2 iya kuba ngumphathi wokunika ubomi kule thafile ye-atypical njengoko inebhodibhodi eshukumayo ebonakalayo. Le keyboard, yakuba ivuliwe, iyayivumela ukuba isetyenziswe ngokungathi yincwadi yenethiwekhi, ishiya iscreen sinotyekelo oluthile lokujonga okungcono. Kubonakala kunomdla nangona kuya kufuneka uzame ukufumana umbono olunge ngakumbi.
Iya kuba namazibuko amancinci e-HDMI, i-mini-USB kunye nekhadi le-SD kunye nomfundi wekhadi. Kule nto sidibanisa uqhagamshelo lwe-Wi-Fi b / g / n, iBluetooth 2.1 + .Umthamo wokugcina unokukhethwa phakathi kwe-16 GB okanye i-32 GB yememori ye-eMMC Flash.
Le thebhulethi ayinayo neekhamera kwaye zimbini ezibanayo, ewe ngaphambili enye nenye ngasemva. Eyokuqala i-1,2 Mpx kunye neyesibini i-5 Mpx ene-LAD-uhlobo lweflash.
Ubukhulu bayo buyi-273x180x17,7 mm kunye nobunzima be-886 gram. Ixabiso lesi sixhobo sesibini se-Asus Android siya kuba malunga ne-499-799 yeedola kwaye ayisayi kuba kude kube ngoMeyi xa sinokuyiphatha Inguqulelo yobusi fakiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » UAsus Eee Pad Slider, ithebhulethi enebhodi yezitshixo
Kwi-Altek Leo 3.5G ene-Android 2.1 okanye i-2.2, ngaba ikhona into oyaziyo ukuba bayivelisa kwi-CES?
Phendula u Tinny
Ndifuna nokwazi ukuba bazisa nini i-ALTEK LEO.